I-Magnificent Oceanview Condo enePoli yaBucala - I-Airbnb
I-Magnificent Oceanview Condo enePoli yaBucala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlvaro
I-condo yoyilo yabucala yangoku eneplan yomgangatho ovulekileyo, ichibi labucala, i-sundeck, i-terrace, kunye ne-BBQ grill. Ifanelekile kwiintsapho kunye nezibini!
Le ndawo intle yokujonga ulwandle ibekwe ngaphakathi kwendawo yokuphumla eneenkwenkwezi ezi-4 ekumantla ePlaya Hermosa kwiphondo laseGuanacaste. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zibandakanya iiphuli ezimbini, iJacuzzi, iindawo zokutyela ezimbini ezibandakanya konke, indawo yokutyela, indawo yokufikelela elwandle (i-1/2 yeemayile ukuhamba ukusuka kwi-villa), izithuthi zangaphakathi (iinqanawa zihamba rhoqo ngemizuzu eyi-10 ukuya nokusuka elunxwemeni ukuya kuzo zonke iindawo. Indawo yokuphumla), ulonwabo, ibha, ivenkile yesikhumbuzo, ivenkile eluncedo, indawo yokujonga ulwandle, iinkonzo zeendwendwe ezigcweleyo (ugcino lwendlu, ukutya kunye nesiselo, i-concierge, ulonwabo, inkonzo yasekamelweni, ukhenketho) kwaye babonelela ngazo zonke iiphakheji ezibandakanya usapho ukuba uya sunqwenela ukupheka ngexesha lakho leholide. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ibekwe ngokucwangcisiweyo kuphela imizuzu engama-30 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iDaniel Oduber International (LIR) eLiberia apho kukho iinqwelomoya ezininzi ezithe ngqo ezisuka kwizixeko ezikhulu ezininzi eUS, eYurophu, eCanada nakuMzantsi Melika, kunye neenqwelomoya zasekhaya ukuya/zisuka eSan. UJosé. Le condo yindawo entle esisiseko yokuphonononga iphondo elihle laseGuanacaste kwaye isebenza njengendawo entle yokuchitha ubusuku bakho bokugqibela ngaphambi kokuba ubhabhe ubuyela ekhaya, indawo yokuphumla egqibeleleyo yothando kunye neyabucala kwizibini ezitshatileyo okanye njengendawo efanelekileyo yomntwana ukonwabela iholide yosapho. .
I-condo inamagumbi okulala amathathu lilinye elinebhedi ephindwe kabini, amagumbi okuhlambela amabini agcweleyo, ikhitshi egcweleyo enesiqithi kunye neendawo eziphakamileyo zegranite, igumbi lokuhlala, i-terrace enkulu, iphuli yangasese, indawo enelanga, kwaye inika umbono ophefumlayo wolwandle. Ngokubhekiselele kwizinto eziluncedo, i-villa ihonjiswe kakuhle kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ukuba ingahlala iindwendwe ezintandathu, ine-WIFI, iiTV ezintathu zescreen esicaba, umabonakude wentambo kunye namajelo amakhulu ase-US kunye nasekhaya, iDVD player, iBose SoundDock Digital System, iseti epheleleyo yeelinen. kunye neetawuli, kwaye ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto zokupheka, i-silverware, i-dinnerware, i-glassware kunye ne-drinkware, i-oven microwave, ifriji egcweleyo, i-oven, uluhlu lwegesi, umenzi wekofu, i-BBQ yegesi, iketile yombane, kunye ne-toaster.
Kukho ivenkile ekufutshane ePlaya Hermosa ebizwa ngokuba yi "Luperon" kunye nevenkile enkulu ethengisa igrosari ePlayas del Coco (i-15 min drive) ebizwa ngokuba yi "Automercado" enemveliso entsha kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nomtya omncinci weebhanki, iindawo zokutyela, imivalo, iivenkile zezikhumbuzo, iivenkile ezithengisayo. Lo mmandla unentaphane yezinto ezinomtsalane kubakhenkethi ezifana neDiamante Eco-Adventure Park ePlaya Matapalo, ukhenketho lokuloba, ukusefa kwiWitch's Rock kunye neOllie's Point (ifikeleleka ngesikhephe kuphela), ukuntywila, kwaye ungajonga iRincon de la Vieja National Park. I-90 min drive) kunye ne-Monteverde Cloud Forest Reserve (i-2 iyure yokuqhuba). Le yeyona ndawo ibalaseleyo yokujonga ulwandle ePlaya Hermosa kuluhlu lwayo lwamaxabiso kunye nendawo efanelekileyo yeholide yosapho, ukubaleka kwezothando, iholide yasemva komtshato, itheko le-bachelor/bachelorette, okanye uhambo olugcweleyo olumnandi kunye nabahlobo. Uphononongo luthetha ngokwalo! :-)
4.87 out of 5 stars from 427 reviews
4.87 · Izimvo eziyi-427
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi427
Ukhuselekile, Unoxolo, Ukuzola, kwaye ukufutshane nolwandle.
Ndihlala eSan José, kodwa ndifumaneka ngo-Airbnb, ngoWhatsapp okanye ngefowuni ukuba kuyimfuneko. Ndinabasebenzi bokunceda iindwendwe kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide.